မြန်မာ ရိုဟင်ဂျာ စာကြည့်တိုက်: မြန်မာပြည် အပြောင်းအလဲ နဲ့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး အခွင့်အရေး
မြန်မာပြည် အပြောင်းအလဲ နဲ့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး အခွင့်အရေး
ဒီတပတ် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးရာ ဆွေးနွေးခန်းမှာ မြန်မာပြည်မှာ နိုင်ငံရေးအခြေအနေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ တိုးတက်လာမှုကြောင့် အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်မှုများကို ဖယ်ရှားဖို့ ပြင်ဆင်နေချိန်မှာ မြန်မာပြည်အနောက်ဖက်အခြမ်းမှာ ရှိနေတဲ့ မူဆလင် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများရဲ့  လူ့အခွင့်အရေး၊ တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်များ ရရှိရေးအရေးကိစ္စများကိုလည်း အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ ဝိုင်းဝန်းကူညီဖြေရှင်းပေးဖို့ တောင်းဆိုနေတဲ့ အမေရိကန်အခြေစိုက် ရိုဟင်ဂျာအသင်းရဲ့  ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူ Dr. Wakar Uddin ကို ဗွီအိုအေ မြန်မာသတင်းဌာနမှူး ဦးသန်းလွင်ထွန်းက တွေ့ဆုံမေးမြန်း ဆွေးနွေးသုံးသပ်တင်ပြထားပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  နိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ် ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုတွေကြောင့် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကို ရုတ်သိမ်းရေး၊ ဒါမှမဟုတ် အတိုင်းအတာလျှော့ချရေး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဖက်ခြမ်းက မူဆလင် ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့  အရေးကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်စားသင့်တယ်လို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ရှိနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရိုဟင်ဂျာအသင်းရဲ့  ခေါင်းဆောင် Dr. Wakar Uddin က အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကို တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Daniel Bell နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ Pennsylvania ပြည်နယ် တက္ကသိုလ်၊ အဏုဇိဝဗေဒဌာန ပါမောက္ခ Dr. Wakar Uddin ကို ဗွီအိုအေ က တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
Dr. Wakar Uddin ။ ။ ကျနော်ကို အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနက Deputy Assistant Secretary of State Daniel Bell က ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီ meeting မှာ သူက ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေရဲ့  အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ တော်တော်များများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ အဓိကတော့ relaxation of sanction အတွက် စဉ်းစားနေတော့ အမေရိကန်အစိုးရက ရိုဟင်ဂျာရဲ့  ရှေ့ ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ တော်တော်စိုးရိမ်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ sanction ကို relax လုပ်တဲ့အချိန်မှာ ရိုဟင်ဂျာအကြောင်း၊ ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ မြန်မာအစိုးရနဲ့ စကားပြောဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ ကျနော် နားလည်းသလောက်ကတော့ အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေအရ မြန်မာနိုင်ငံကို လက်ရှိထားရှိတဲ့ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကို တဖြည်းဖြည်းလျှော့ချပေးဖို့ စဉ်းစားနေတယ်။ တကယ်လို့ ဒီအခြေအနေမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အနောက်ဖက်ဒေသမှာရှိနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေရဲ့  အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ်လို့ Dr. Wakar တို့က ယူဆတဲ့အတွက် ဒီပြဿနာကို လာရောက်တင်ပြဆွေးနွေးတဲ့ သဘောပေါ့။
Dr. Wakar Uddin ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ အဲဒီတော့ ဒီနေရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဖက်ခြမ်း ရခိုင်ပြည်နယ်ဒေသမှာရှိနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့  ပြဿနာတွေဟာ ဘာတွေလည်းဆိုတာကို ကျနော်ကို ရှင်းပြပါလား။
Dr. Wakar Uddin ။ ။ ရခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးရဲ့  အခြေအနေက တော်တော်ဆိုးပါတယ်။ ပြဿနာက တခုမဟုတ်ပါဘူး။ ပြဿနာက အများကြီးရှိပါတယ်။ အဓိကပြဿနာကတော့ တိုင်းရင်းသားကြောင့် ရိုဟင်ဂျာတွေက၊ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  တိုင်းရင်းသားအစစ်ဖြစ်ပေမယ့် သူတို့လက်ထဲမှာ အခု တိုင်းရင်းသားလက်မှတ် မရှိပါဘူး။ တိုင်းရင်းသားမဖြစ်လို့ လက်မှတ်မရှိလို့ သူတို့သွားလာခွင့်၊ ရန်ကုန်သွားခွင့်၊ စစ်တွေသွားဖို့အတွက် သွားလာခွင့် မရှိပါဘူး။ အခုတော့ နည်းနည်းပါးပါး သွားခွင့်ပြုနေတယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့ လက်ထပ်လို့ မရပါဘူး။ ပြီးတော့ ကျောင်းတွေပါတွေသွားတာ ပညာရေးတို့ ပတ်သက်လို့မရဘူး။ အခက်အခဲရှိပါတယ်။ ကောလိပ်တို့ဘာတို့သွားဖို့လည်း အခက်အခဲ ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ လယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုတို့အတွက်လည်း ပြဿနာဖြစ်နေပါတယ်။ အဓိကအကြောင်းကတော့ တိုင်းရင်းသားကြောင့် -
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ သဘောက နိုင်ငံသားနဲ့ တိုင်းရင်းသား ရပိုင်ခွင့်တွေ ဆုံးရှုံးနေတယ်။ လူ့အခွင့်အရေး ပညာသင်ကြားပိုင်ခွင့် ဆုံးရှုံးနေတယ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ အဓိကအကြောင်းပေ့ါ။ အဲဒီတော့ ဒီနေရာမှာ ကျနော်တို့ ဗွီအိုအေ အနေနဲ့ကတော့ ရိုဟင်ဂျာ တိုင်းရင်းသားဖြစ်မှုမဖြစ်မှု ပြဿနာကို တော်တော်လေး အငြင်းပွားနေတဲ့ ပြောဆိုနေတဲ့ ပြဿနာလို့ နားလည်းပါတယ်။ နားလည်းတော့ ဒီကိစ္စဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ နိုင်ငံသားဖြစ်မဖြစ်၊ တိုင်းရင်းသားဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာတွေကိုတော့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ဘယ်ဖက်ကမှ လိုက်ပြီးဆွေးနွေးစရာမလိုဘူးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ နားလည်းသလောက်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  အနောက်ဖက်ပိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင် မောင်းတော်ဒေသမှာ ရိုဟင်ဂျာလို့ ခေါ်တဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ခေါ်တဲ့ လူစုတွေရှိတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ဒီဒေသမှာ လူဦးရေ နှစ်သန်းလောက် ရှိနေကြတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီလူဦးရေ နှစ်သန်းတို့ဟာ နိုင်ငံသားအဖြစ် သတ်မှတ်တာ မခံရဘူး။ နိုင်ငံမဲ့တွေ ဖြစ်နေကြတယ်။ အခွင့်အရေးတွေ မရဘူး၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့ အစီရင်ခံစာတွေ ကျနော်တို့ ကြားနေရတယ်။ ဒီပြဿနာကိုတော့ တကယ်တမ်းကြရင် နောက်ပိုင်းမှာ ဒေသအတွင်းမှာ ရှိနေတဲ့ အနီးစပ်ဆုံးရှိနေတဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ၊ မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းပါတီတွေနဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီလို ဆွေးနွေးဖို့ အကြောင်းကိစ္စမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ဘယ်လို ဝင်ပြီးပါဝင် တိုက်တွန်းနိုင်မှုတွေ လုပ်နိုင်မယ်လို့ ယူဆလို့လဲ။
Dr. Wakar Uddin ။ ။ သူတို့က အမေရိကန်အစိုးရက အခု ကျနော်တို့ အကြံပေးတာက စကားပြောဖို့။ အခု မြန်မာအစိုးရနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  opposition အန်အယ်လ်ဒီနဲ့ ရိုဟင်ဂျာ leadership, ရိုဟင်ဂျာ MP တွေရှိတယ်။ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ နောက် ရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့ စကားပြောပြီး ပြဿနာကို အေးအေးဆေးဆေး ရှင်းဖို့အတွက် ကျနော်တို့က အကြံဥာဏ်ပေးပါတယ်။ အမေရိကန်အစိုးရကိုယ်တိုင်လည်း တတ်နိုင်သလောက် မြန်မာအစိုးရကို persuading လုပ်ပြီးတော့ negotiation လုပ်ပြီးတော့ ဒီပြဿနာကို အေးအေးဆေးဆေး peacefully ရှင်းဖို့အတွက် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး ရှာနေပါတယ်။ အဲဒီတော့ အစိုးရကိုယ်တိုင်လည်း အဲဒါကို နည်းလမ်းရှာနေပါတယ်။ ပြီးတော့ တခြား အန်ဂျီအို တို့၊ တခြား organization တို့၊ regional organization, regional countries such as ASEAN သူတို့လည်း ပါဝင်အောင် အဖက်ဖက်ကနေ နားလည်းမှုရအောင်။ နားလည်းမှုနဲ့ I want to emphasize the word နားလည်းမှု - နားလည်းမှုနဲ့ ပြဿနာမလုပ်ဘဲနဲ့ နားလည်းမှုနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး ရှင်းကြဖို့အတွက် အကြံဥာဏ်ပေးပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ကြိုးစားနေပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ အဲဒီတော့ အခုလက်ရှိ အခြေအနေကတော့ ကျနော်တို့ နားလည်းသလောက်က မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကနေ ပြဌာန်းထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေစာရင်းမှာ လက်ရှိနောက်ဆုံး ပြဌာန်းချက်အရဆိုရင် ရိုဟင်ဂျာဟာ တိုင်းရင်းသားအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း မခံရဘူး။ အလားတူပဲ အနီးစပ်ဆုံး ရှိနေတဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်း လူမျိုး၊ ဓလေ့ထုံစံ၊ ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတရားအရ အမျိုးမျိုးကွဲခြားချက်တွေ အကြောင်းပြပြီးတော့ ဒီဟာ သူတို့ရဲ့  ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ဒါဟာ ပြည်နယ်ထဲမှာ အစပျိုးနေထိုင်တဲ့ တိုင်းရင်းသားမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အဆင့်မျိုးနဲ့ ခါးခါးသီးသီး ငြင်းပယ်မှုတွေ ရှိနေတယ်။ ဒီပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမှ ရနိုင်မလဲဆိုတာကို Dr. Wakar အနေနဲ့ ဘယ်လိုယူဆသလဲ။
Dr. Wakar Uddin ။ ။ ဒီ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးက နည်းနည်းသီးသန့်ဖြစ်ပေမယ့်၊ မတူပေမယ့်၊ culturally religious-wide, traditionally မြန်မာအစိုးရနဲ့ မြန်မာ society က ရိုဟင်ဂျာကို လက်ခံရပါမယ်။ Open minded နဲ့ အမြင်ကျယ်ကျယ်နဲ့ လက်ခံရမယ်။ ဒါလည်း လူမျိုးပါပဲ။ ကျနော်တို့လည်း လူသားလူမျိုးပါပဲ။ ကျနော်တို့နဲ့ မတူပေမယ့် သူတို့လည်း လူသားဆိုပြီး လက်ခံရပါမယ်။ သူတို့လက်ခံရင် ကျနော်တို့ဖက်က ကျနော်တို့လည်း သူတို့နဲ့ပေါင်းဖို့အတွက် assimilation အတွက် ကြိုးစားပါမယ်။ အဓိကတော့ ပညာရေး။ ကျနော်တို့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးက ပညာသိပ်မရှိဘူး။ မောင်းတော၊ ဘူးသီးတောင်မြို့ မှာပဲ နည်းနည်းပညာရှိပါတယ်။ အပြင်သွားရင် နယ်တွေရွာတွေသွားရင် ပညာမရှိဘူး။ လူတွေမှာ ပညာမရှိရင် လူတွေက အမြင်မကြည်ဘူး၊ လူတွေက မပေါင်းချင်ဘူး။ အဲဒီတော့ ပညာရေးကို တိုးတက်အောင် မောင်းတော၊ ဘူးသီးတောင်မှာ လူတွေအမြင်ကျယ်လာအောင် ပညာတတ်လာအောင်၊ မြန်မာစကားတွေ ပိုတတ်လာအောင်၊ မြန်မာစာတွေ တတ်လာအောင် မြန်မာအစိုးရက ကြိုးစားရပါမယ်။ အဲဒီတော့ နှစ်ဖက်စလုံးက ကျနော်တို့ဖက်ကလည်း လုပ်ရမယ်။ သူတို့ဖက်ကလည်း နားလည်းမှုရှိရမယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ တဖက်နဲ့တဖက် အပြန်အလှန် နားလည်းမှုရှိလာအောင် လုပ်လာရမှာပေါ့။ အဲဒီနေရာမှာ တကယ်တမ်း ကွာခြားချက်က ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံစံနဲ့ ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတရား ဖြစ်နေတယ် မဟုတ်ဘူးလား။ အဲဒီတော့ ဒီလောက်ကွာခြားတဲ့ အစုအဖွဲ့နှစ်စု ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ရပ်တည်ပြီးတော့ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။
Dr. Wakar Uddin ။ ။ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အားလုံး လူသားပဲ။ လူမျိုးတွေပဲ။ We are all human. တခြားနိုင်ငံတွေမှာ သွားကြည့်ပါ။ ယိုးဒယားမှာ၊ မလေးရှားမှာ သွားကြည့်ပါ။ လူတွေက မတူဘူး။ မတူပေမယ့် အမြင်ကျယ်သွားရင်၊ လူတွေ ပညာတတ်ရင် အတွေးအခေါ်ရှိပါမယ်။ အတွေးအခေါ်ရှိရင် လူတွေပေါင်းပါမယ်။ အခု ရိုဟင်ဂျာမှာ ဘာသာတရား မတူပေမယ့်။ ဘာသာတရားဆိုတာ personal belief ယုံကြည်မှုတခု။ အဲဒါက လူတယောက်ပေါ် harm မဖြစ်ပါဘူး။ ဘာသာတရားက နောက်တယောက်က ဘာသာတခုက နောက်တခုကို ဘယ်တော့မှ harm မပြုပါဘူး။ damage ထိခိုက်အောင် မလုပ်ပါဘူး။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ဘာသာတရား အစစ်အမှန်ဆိုရင် ထိခိုက်အောင် မလုပ်ပါဘူး။
Dr. Wakar Uddin ။ ။ ဘာသာတရားဆိုတာ spiritual - ဒါကို စိုးရိမ်စရာ မလိုပါဘူး။ ယဉ်ကျေးမှု - ကျနော်တို့ ရိုဟင်ဂျာ ယဉ်ကျေးမှု က ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှု ရှိပေမယ့် အဲဒီ ယဉ်ကျေးမှုက မြန်မာယဉ်ကျေးမှု၊ ရခိုင်ယဉ်ကျေးမှုကို ဘယ်လို ထိခိုက်ပါ့မလဲ။ ထိခိုက်လို့ မရပါဘူး။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ဒါပေမဲ့ ကျနော် ဖြတ်မေးချင်တာတခုကတော့ ဥပမာအားဖြင့် ရိုဟင်ဂျာတွေက ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကား ရှိတဲ့ဆိုပေမယ့်လည်း တကယ်တမ်း နီးစပ်တာက တဖတ်က ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေနဲ့ ပိုမနီးစပ်ဘူးလား။ ဘာသာတရား၊ ပြောတဲ့စကား၊ ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံ နေထိုင်ပုံအရ
Dr. Wakar Uddin ။ ။ အပြင်ကကြည့်ရင် သူတို့နဲ့ နည်းနည်းတူတယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ လူတွေက ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်ကြည့်ရင် မောင်းတောကို သွားကြည့်ရင် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေ ဘယ်လိုနေလဲ၊ ဘယ်လိုစကားပြောလဲ။ သူတို့နေထိုင်မှုတွေ တော်တော်ကွာပါတယ်။ ကျနော် example (ဥပမာ) တခုပေးပါမယ်။ ရိုဟင်ဂျာ နှစ်သိန်း၊ သုံးသိန်းလောက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်ထဲသွားခဲ့ပါတယ်။ ဟိုမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ တယောက်မှ ရောလို့မရဘူး။ Refugees က Refugees သီးသန့်နေပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ သူတို့မတူပါဘူး။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ အဲဒီတော့ သူတို့ရဲ့ ဇာတိဟာ ဘာပဲပြောပြော မြန်မာပြည်က ဇာတိပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့။ အဲဒီတော့ ကိုယ့်ဇာတိမှာပဲ ကိုယ်နေချင်ကြတယ်ပေ့ါ။
Dr. Wakar Uddin ။ ။ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အများကြီးကွာပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ အဲဒီတော့ အခု မကြာသေးခင်ကပဲ Dr. Wakar က အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Hilary Clinton ဆီကို စာရေးတယ်။ စာရေးတဲ့စာကို အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်။ အခု မကြာခင်မှာ သံအမတ်ကြီးဖြစ်မယ်လို့ ခန့်မှန်းခံထားရတဲ့ Derek Mitchell နဲ့ ဒုတိယ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Michael Posner တို့ စာပြန်ရေးထားတာကိုလည်း ကျနော်တွေ့ပါတယ်။ အဲဒီတော့ သူတို့ပြန်ထားတဲ့ စာတွေရဲ့  အကျဉ်းချုပ်က ဘာလဲဆိုတာကို ကျနော်ကို ပြန်ရှင်းပြပါလား။
Dr. Wakar Uddin ။ ။ အဲဒီစာမှာ ရေးထားတာက သူတို့က ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးအတွက် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး အခု ရခိုင်ပြည်မှာ ခံစားနေရတာ politically, religiously, culturally, socially သူတို့က ခံစားနေရတာကို အမေရိကန်က သိပ်စိုးရိမ်ပါတယ်။ သူတို့ကို abuse human rights violations လူ့အခွင့်အရေး နီးစပ်တာက အမေရိကန်အစိုးရက သိပ်စိုးရိမ်တယ်။ စိုးရိမ်တော့ Secretary Hillary Clinton ဗမာပြည်သွားတုန်းက သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ ကိုယ်တိုင်စကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လို့ စာမှာရေးထားပါတယ်။ သူတို့က ဒါမျိုး လူမျိုးတမျိုးကို တခြားလူမျိုးတမျိုးက၊ အစိုးရ government တခုက ဒီလို နှိပ်စက်တာ၊ human rights violations လုပ်တာ၊ အမေရိကန်က ဘယ်တော့မှ သည်းခံမှာ မဟုတ်ပါဘူးလို့ ရေးထားပါတယ်။ အဲဒီတော့ သူတို့က ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့  human rights violations လုပ်တာကို သူတို့ ဆက်လက်ပြီး persuade လုပ်ပါမယ်။ ကာကွယ်ပေးပါမယ်လို့ ရေးထားပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ အမေရိကန်ရောက် ရိုဟင်ဂျာအသင်း ခေါင်းဆောင် Dr. Wakar Uddin ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါ။
တွေ့ဆုံးမေးမြန်းမှု ဗီဒီယိုဖိုင့် ကြည့်ရူရန် ဒီမှာကလစ်ပါ
ပေးထားသည့် မှတ်ချက်များအား မကြာမီ တင်ပေးပါမည်။ခေတ္တစောင့်ဆိုင်းပါ။
ROHINGYA AND ARAKAN HISTORY
31. The Egual Rights Truth (Genocide on Rohingya Report)
30 .DEMOCRACY IMPLICATIONS OF AUNG SAN SUU KYI'S EUROPEAN TRIP...by Rolan watson
1 FLUCTUATION OF POWER
10 Human Rights Abuses and Discrimination on Rohingyas
11 ROHINGYA AND BONAFIDE CITIZEN ISSUE
12 MUSLIM PRIME MINISTERS AND MINISTERS OF ARAKAN KINGDOM
13 Reporting political and Human Rights Issues Facing Rohingya in Burma (Myanmar)
14 The Rohingya Minority fundamental Rights Denied (Amnesty International)
15 The Situation of Rohingya Children in Myanmar (Burma)
16 The Situation of Statless Rohingya Women in Myanmar (Burma)
17 THE ROHINGYA MUSLIM ENDING A CYCLE OF EXODUS ?
18 Violence Against Rohingya women in Northern Rakhine state of Myanmar (Burma)
19 Burma Citizenship Law of 1982
2 NAT SHIN MAI A4
20 Rohingyas Tears Down the Cheeks
21 North Arakan: an open prison for the Rohingya in Burma
22 A short History of Rohingya and kamas of Myanmar (Burma)
23 Discrimination and ethnic cleansing in Arakan (Report)
24 Genocide and Gross Human Rights violations
25 A short Historical Background of Arakan
26 A Rohingya History By Noor Kamal
27 Racism to Rohingya in Myanmar(Burma)
28. Rohingya tangled in Burma Citizenship politics
29. THE ARAKAN PROJECT (November 2011 to May 2012 Report)
3 ROHINGYA ARE NATION IN ARAKAN
4 ARAKAN BEFORE 11th CENTURY A.D
6 TOWARDS UNDERSTANDING ARAKAN HISTORY (part 2)
7 TOWARDS UNDERSTANDING ARAKAN HISTORY (part 1)
8 THE MUSLIM BUDDHIST KINGS OF ARAKAN
9 Crimes against Humanity in Western Burma
သို့ / နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးသိန်စိန်
တိုင်းရင်းသား ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများအား လူမျိုးဘာသာခွဲခြား ဆက်ဆံ အုပ်ချုပ် စီမံခန့်ခွဲနေခြင်း ကိစ္စကို ဖယ်ရှားပေးပါရန်။ အပြည့်စုံ ဖတ်ရန် ပုံကို ကလစ်ပါ။
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ထံသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ။(by u myo aung)
အပြည့်စုံ ဖတ်ရန် ပုံကိုကလစ်ပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ(by Free Rhingya Campaign)
အပြည့်စုံ ဖတ်ရန် ပုံကို ကလစ်ပါ။
မြန်မာ မူစလင်များ၏ ဖြစ်စဉ်သမိုင်း ဦးမောင်မောင်(မန်) သမိုင်းသုတေသီ
မြန်မာ မူစလင်(မ်)များ၏ ဖြစ်စဉ်သမိုင်းနှင့် အမျိုးသားတာဝန်များ။ အပြည့်စုံဖတ်ရန် ပုံကိုကလစ်ပါ။
ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့်ရိုဟင်ဂျာလူ့အဖွဲ့အစည်း။ ပုံကိုကလစ်၍ ဖတ်ပါ။
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံနှင့်တိုင်းရင်းသား ရိုဟင်ဂျာများ
ရိုဟင်ဂျာ သမိုင်းစာအုပ်။ ပုံပေါ်ကလစ်၍ ဖတ်ပါ။ Fire fox ဖြင့်ဖတ်ပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
မြန်မာမူစလင် ဘင်္ဂါလီမဟုတ်ပါ။ အပြည့်စုံ ဖတ်ရန် ပုံကိုကလစ်ပါ။
Burmese invasion of Arakan and the rise of non Bengali settlements in Bangladesh
Origin of the Tribes of Chittaging Hill Tract (CHT) By Abid Bahar, Canada Introduction: Arakan wasamedieval kingdom located at the edge...
အပိုင်း (၃) မောင်းတောမြို့ အနှံ့ ရိုဟင်ဂျာရွာများကို ရွာလုံးကျွတ် မီးရှို့၍ လူကိုအစုလိုက် အပြုံလိုက် စစ်တပ်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ ပူးပေါင်းအကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်မှုကြီးအကြီးအကျယ်လုပ်နေကြသည်
အနည်းဆုံး ရိုဟင်ဂျာရွာပေါင်း (၃၀)ကျော် မီးရှို့ခံရပြီး ရိုဟင်ဂျာ ဦးရေး ခလေး လူကြီးနည်းဆုံး (၁၀၀)နီးပါး အကြမ်းဖြတ်သတ်ဖြတ်ခံရကြောင်း ထိုသို့ ...
မောင်းတောမြို့ က အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုရဲ့  နောက်ဆက်တွဲ သတင်း
09 june 2012 မနေ့က ဇွန် ၊၀၈၊ ၂၀၁၂ နေ့ပိုင်းတွင် မောင်းတောမြို့ နေ ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသား ဒေါက်တာနောဂျူမော်ဒင် အသက် (၆၅ - ၇၀) လောက်ရှိသူသည်...
Indonesia Didesak Bantu Rohingya
အပိုင်း (၉) မောင်းတောမြို့ အနှံ့ ရိုဟင်ဂျာရွာများကို ရွာလုံးကျွတ် မီးရှို့၍ လူကိုအစုလိုက် အပြုံလိုက် စစ်တပ်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ ပူးပေါင်းအကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်မှုကြီးအကြီးအကျယ်လုပ်နေကြသည်
တိုက်ရိုက် ဖုန်းလိုင်းပေါ်က မောင်းတော အချိန် နံနက် ၀၆း၃၀ မိနစ် ၊ ၀၉ ၊ ၀၆ ၊ ၂၀၁၂ စနေနေ့ မောင်းတောမြို့ ပေါ်က အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်မှုများ အေးအေ...
အပိုင်း (၈) မောင်းတောမြို့ အနှံ့ ရိုဟင်ဂျာရွာများကို ရွာလုံးကျွတ် မီးရှို့၍ လူကိုအစုလိုက် အပြုံလိုက် စစ်တပ်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ ပူးပေါင်းအကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်မှုကြီးအကြီးအကျယ်လုပ်နေကြသည်
တိုက်ရိုက် ဖုန်းလိုင်းပေါ်က မောင်းတော အချိန် နံနက် ၀၃း၁၅ မောင်းတောမြို့ ပေါ်က အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်မှု ဆဲသွားပြီးဟုသိရသည် သေနတ်သံများကို ကွက...
2014 Census in Burma must be universal and inclusive of Rohingya : Rohingya organizations
Chittagong, Bangladesh: Several Rohingya organizations had madeacall for the 2014 census in Burma to be universal and inclusive of th...
ရခိုင်လူသတ်မှုနဲ့ နိရဉ္စရာ သတင်းဌာန ပတ်သက်မှု
ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မှာဖြစ်သွားတဲ့ စုပြုံလူသတ်မှုရဲ့အစကဘာလဲ? မြန်မာအစိုးရ မီဒီယာက မွတ်စလင်ကုလားဆိုပြီးကြေညာတာကနောက်မှပါ။ ရခိုင်လူ သ...
မြန်မာသမိုင်းတွင် ရိုဟင်ဂျာများသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု တစ်စုအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့။
စကားဦး ::…လူသားတိုင်း ရသင့်ရထိုက်သော ရပိုင်ခွင့်၊ ခံစားခွင့် များကို လူမျိုးဘာသာမရွေး ရရှိသင့်ပါသည်။ သို့မှသာ Human Rights – (လူ့အခွင့်အ...
အပိုင်း (၁) မောင်းတောဆန္ဒပြပွဲတွင် စစ်တပ်နှင့် လုံထိန်းပေါင်းပစ်ခတ်မှုကြောင်း အသေပျောက်များပြား
၂၉.၀၅.၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီး တစ်ယောက်ကို န.စ.က တပ်ဖွဲ့ဝင်များက အုပ်စုလိုက် မဒိမ်းကျင့်ခံရပြီးနောက် မတော်မတရား သားမယားပြုကျင့်ခ...
အခြား မြန်မာသတင်း ဝက်ဆိုဒ်များ
ကချင်စစ်ရပ်စဲရေးဦးဆောင်သူသုံးဦးကို မြန်မာစစ်တပ် တရားစွဲ
တကြော့ပွနျ ကခငျြစဈပှဲ ဘာလို့ တာရှညျ နရေသလဲ
အာရှလမ်း နတ်စင်ကွေ့အနီး ခရီးသည် ၁၅ဦး တင်ဆောင်လာသော ယာဉ်တစ်စီး မီးလောင်
၂၅၅။ – ( ရိုဟင်ဂျာအထောက်အထားများ ),Rohingya Documents « danyawadi
နယ်​နိမိတ်​မျဉ်းမှ ထွက်​ခွာသွားရန်​ သတိ​ပေး
Rohingya Women Detained over Allegation of 'Illegal Return' to Myanmar
Understanding the Persecution of the Rohingya Minority in Myanmar
ကုလားတန် သတင်း ပထမဦးဆုံး ရိုဟင်ဂျာ သတင်းဌာန
Myanmar Muslim Net : News
Burmese Rohingya Association in Thailand (BRAT)
မြန်မာရိုဟင်ဂျာ စာကြည့်တိုက်သို့ စာဖတ်လာ ဂုဏ်သရေရှိ လူကြီးမင်းများကို လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏။
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးနဲ့ ပတ်သက်သည့် သတင်း၊မှတ်တမ်း၊မှတ်ရာများနှင့်
စာမူများကို ပို့လိုပါက အောက်ပါ Email သို့ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
ရိုဟင်ဂျာ့ သမိုင်း စာမျက်နှာများအား အလွယ်တကူဖတ်ရှုနိုင်ရန် တင်ပြပေးထားပါသည် လိုရာကိုသာ ကလစ်လိုက်ပါ။
27..ရိုဟင်ဂျာ ဘယ်သူလဲ ?
26.. '' ဗုဒ္ဓဘာသာမြစ်ဖျားနှင့် သမိုင်းရှုထောင့်'' စာအုပ်ပါ အလွဲသမိုင်းများအား ထောက်ပြပြင်ဆင်ပေးသည့် ကျမ်းငယ်..
25. ကမန်တိုင်းရင်းသား သမိုင်းအကျဉ်း
24. ဇန်နဝါရီလ (၃)ရက်နေ့တွင်ကျရောက်သည် ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနား
23. ကျောက်တော်မြို့ ၊နိဒင်ရွာရှိ အစ္စလာမ်း ဘာသာရေးကျောင်းသမိုင်း အကျဉ်း
22. ရခိုင် သို့မဟုတ် ရိုးဝန်ညာ လူမျိုးများ
21 ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး သမိုင်းအကျဉ်း
20. ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် ဆင်နွှဲခဲ့သော နိုင်ငံတော်အဆင့် လူမျိုးပြုတ် စစ်ဆင်ရေးနှင့် တရားမဲ့ ပြုကျင့်မှုများ
19. ဘုံပျောက်မှာ စိုးကြောက်မိရှာ(အသစ်)
18. ဗမာမူစလင်(မ်)သမိုင်း အကျဉ်း
17. လူမျိုးနှင့် ဘာသာပတ်သက်ခြင်းမရှိ(အသစ်)
16. " ရိုဟင်ဂျာ'' ထု တရပ်လုံး သိသင့် သိထိုက်သောငြင်းပယ်မရသည့် သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်များ(firefox)ဖြင့်ဖတ်ရန်
15. မြန်မာသမိုင်းပညာရှင်များနှင့် ကမ္ဘာ့သမိုင်းပညာရှင်များ၏ ရိုဟင်ဂျာအကြောင်းတင်ပြချက်များ(firefox)ဖြင့်ဖတ်ရန်
14. သစ္စာရှိသော ရိုဟင်ဂျာများ firefox ဖြင့်ဖတ်ရန်
13. ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး သမိုင်းအကျဉ်းချုပ်
12. ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်လူမျိုး နှစ်မျိုးစလုံးကိုရောပြီး(ARAKAN)လို့ဘယ်သူတွေကခေါ်တာလဲ ?
11 နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ထံသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ(ဦးမျိုးအောင်)
10 မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းပါ ရိုဟင်ဂျာသမိုင်း (စာမျက်နှာ ၈၉ မေယုနယ်ခြားခရိုင်၌ဖတ်ရန်)
9 ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ရိုဟင်ဂျာလူ့အဖွဲ့အစည်း(အာမန်ပညာရေး)
8 မြန်မာသမိုင်းတွင် ရိုဟင်ဂျာများသည် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတစ်စုအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့
7 ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် တိုင်းရင်းသား ရိုဟင်ဂျာများ( fire fox)ဖြင့်ဖတ်ရန်
5 ရခိုင်ဘယ်သူလဲ ? ရိုဟင်ဂျာဘယ်သူလဲ ? ဖတ်မရပါက fire fox ဖြင့်ဖတ်ရန်
4 ၁၁ ရာစုမတိုင်မီ အာရ်ကာန်(ရခိုင်)သမိုင်းအကျဉ်း
3 ရိုဟင်ဂျာသမိုင်းကို စောဒက တက်နေသူများသို့ ရှင်းလင်းဖြေကြားချက် တစေ့တစောင်း
2 ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် ဆင်နွှဲခဲ့သော နိုင်ငံတော်အဆင့် လူမျိုးပြုတ် စစ်ဆင်ရေးနှင့် တရားမဲ့ ပြုကျင့်မှုများ
1 ရခိုင် သို့မဟုတ် ရိုးဝန်ညာ လူမျိုးများ
ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသားထုတရပ်လုံးအား ကိုယ်စားပြုသည့် အမျိုးသားအလံ
ရိုဟင်ဂျာမျိုးဆက်သစ်များက သက်မှတ်သည့် ရိုဟင်ဂျာအလံ
၁၁ ရာစုမတိုင်းမီ အာရ်ကာန် (ရခိုင်) သမိုင်းအကျဉ်း
အပြည့်စုံဖတ်ရန် ပုံကို ကလစ်ပါ။
ရိုဟင်ဂျာဘာသာစကား(A to Z )
ရိုဟင်ဂျာဘာသာစကားများ လေ့လာနိုင်ရန် အသစ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာလိရှ် နှင့် အင်္ဂလိပ်စာ တွဲပေးထားသည့်အတွက် လေ့လာသူများအတွက် အဆင်ပြေနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ ပုံကို ကလစ်ပြီ စာအုပ်ပေါ်က (A to Z) လိုရာ စာမျက်နှာကို နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့အလွယ်တကူ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဦးဇိုင်းနဒ္ဒိန် (အလယ်)
ဆရာကြီး ဦးဇိုင်းနဒ္ဒိန်သည် ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသားများအတွက် စံပြ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သလို စစ်တွေ့အမျိုးသား ကျောင်းအုပ်လည်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအား အမျိုးသားစိတ်ဓါတ်ကို ရိုက်သွင်းပေးခဲ့သူ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်တစ်ဦးလည်ဖြစ်သည်။ အပြည့်စုံဖတ်ရန် ပုံကိုကလစ်ပါ။
ရခိုင် ရိုဟင်ဂျာ သမိုင်းအကျဉ်းစာအုပ်
ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးများသည် တချိန်က ကိုယ်ပိုင်စာပေ ယဉ်ကျေးမှုများနှင့်ဓလေ့ ရိုးရာများဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိ အခြားလူမျိုးစုများကဲ့သို့ ရပ်တည်ခဲ့ဖူးကြောင်း သမိုင်းစာမျက်နှာတွေက အကောင်းဆုံး သက်သေများပင်ဖြစ်ပေသည်။ အပြည့်စုံဖတ်ရန် ပုံကို ကလစ်ပါ။
မြန်မာ့ စွယ်စုံကျမ်းပါ ရိုဟင်ဂျာ သမိုင်းမှတ်တမ်း
မြန်မာ့ စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ(၉) အပိုင်း(က) စာမျက်နှာ ၈၉ မေယုနယ်ခြား ခရိုင် အကြောင်း၌ အတိအလင်း ရေးသားထားသည့် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး အကြောင်းများကို လေ့လာဖတ်ရှုရန်။ အပြည့်စုံဖတ်ရန် ပုံကိုကလစ်ပါ။
Gold coin minted in the early period of maruk -u Empire with muslim KALIMA
ရှေးခေတ် Arakanတိုင်းပြည်သုံး ဒင်္ဂါပြားတစ်ပြား
ရှေးခေတ် (Arakan) တိုင်းပြည် ယခု (ရခိုင်ပြည်နယ်)သုံးရွှေဒင်္ဂါပြား
အေဒီ ၁၄ ၊ ၁၅ ရာစု မြောက်ဦးခေတ် ရိုဟင်ဂျာ ကျောက်စာ
ရှေးခေတ် Arakanတိုင်းပြည်သုံး ငွေဒင်္ဂါပြား
ရှေးခေတ် (Arakan) တိုင်းပြည် ယခု (ရခိုင်ပြည်နယ်)သုံး ငွေဒင်္ဂါပြား
Thai officials were involved in human trafficking ...
ဧပြီ ၂၈ ရက်နေ့က မလေးရှား ဆန္ဒပြ (ရုပ်သံ)
ဆန္ဒပြသူ တစ်ဦးအား မလေးရှား ရဲများက ဝိုင်းဝန်းထိုြး...
ဆန္ဒပြသူ အတိုက်အခံ များကို မလေးရှား အစိုးရမှ ဖြိုခဲ...
Burmese TV Update 04-28-2012
ဘရာဇီးမှ မျိုးတုံးတော့မည့် လူမျိုးစု ကယ်တင်ရေး လှု...
အလုပ်သမားအရေး လ၀က အရာရှိများ ထိုင်းမှာရုံးထိုင်ပြီ...
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ...
ဒေသခံ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ မတရားမှု လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရ...
ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေဝေါဟာရအသုံးအနှုန်း ...
မလေးရှား၌ ဆန္ဒပြမည်၊ နိုင်ငံခြားသားများ ပါဝင်ပါက ပြ...
ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ စီးပွားဖက် ဇေကမ္ဘာ၊ ဝါဝါဝင်း ကုမ္ပဏ...
အကြမ်းမဖက်နည်းနဲ့ အပြောင်းအလဲလုပ်နိုင်ကြောင်း မြန်...
Burmese TV Update 04-27-2012
Burmese TV Update (04-26-12)
No Rohingya in NLD membership application: Arakan ...
” The Rohingya Community has fallen down from the ...
သမ္မတကြီးထံသို့ ပြည်တွင်းမှ ရင်ဖွင့်သံ
အဓိကရုဏ်း ဖြစ်မှာ အစ္စလမ် ဘာသာဝင်များ စိုးရိမ်
စဉ့်ကိုင်မြို့နယ် ဘက်ဆွဲတောင်ပိုင်းနေ အစ္စလာမ် ဘာသာ...
Burmese gov’t urged to remove military from Parlia...
မြန်မာအပေါ် ပိတ်ဆို့မှု ရုပ်သိမ်းဖို့ အမေရိကန် မရည်ရ...
မြန်မာ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အခြေအနေ နုနယ်နေဆဲ
Daw Aung San Suu Kyi with BROUK President Maung T...
Why do you hate Muslims???
သမ္မတကြီးထံသို့ ရခိုင်ပြည်တွင်းမှ ရင်ဖွင့်သံ
Burmese TV Update 04-25-12
Rohingya: A Stateless Struggle
Statelessness: A Forgotten Human Rights Crisis
Between Burma and Bangladesh: Rohingya,aStateles...
အမေရိကန် မြန်မာဆက်ဆံရေး တရုတ်အစိုးရ စိုးရိမ်
Two Rohingya women refugee missing in Cox’s Bazar
၈၈ မျိုးဆက်နှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း(ရုပ်သံ)
Rohingya welcome European Parliament Resolution on...
ပြည်မြို့တွင် လျှပ်စစ်မီးအကြောင်းပြု မွတ်စလင်မ်မျာ...
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် လွှတ်တော်တွင်း ပါဝင...
ချင်းပြည်တွင် ဘာသာရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုရှိနေဟု CNP ပြေ...
Interview with U Win Tin – လွှတ်တော်ထဲမှာ ဆင်ခြင်တု...
ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုခြင်းအပေါ် ကြံ့ ခိုင်ရေးပါတီအမြင်(...
ဘူးသီးတောင်မြို့ အထက်ပိုင်း၌ ဒေသခံများထံမှ တပ်ရင်း...
မောင်တောမြို့နယ်မှ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကို မြို့နယ် ...
BROUK welcome EU parliament resolution Burma
ဘန်ကီမွန်း ဒီသီတင်းပတ် မြန်မာနိုင်ငံသွားမည်
စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်ဖွဲ့ဖို့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားေ...
Hundreds of Rohingyas seek refugee status in New D...
DVB သတင်းထောက်၏ လွှတ်တော်သတင်း နေပြည်တော်မှ တိုက်ရိ...
NLD လွှတ်တော် စတင် မတက်ရောက်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ ...
India's tragic Rohingyas
Police killsaRohingya in Maungdaw Rakhine state,...
Myanmar The Penal Code (မြန်မာနိုင်ငံ ရာဇသတ်ကြီး)၊...
မြန်မာမွတ်စလင်မ် ပြည်သူများအား မုန်းတီးသူများသို့ ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်တော်မှ ကြိုဆိုနေဟု သမ္မတ ...
ကျမ်းကျိန်စာသား ပြုပြင်စရာမလိုဟု ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ...
EU to suspend sanctions on Myanmar
ဥပဒေ ချိုးဖောက်မှုလုပ်ရပ်ကို ရဟန်းတော်များ အဖွဲ့ချု...
အကျဉ်းကျဆဲ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မိသားစုတွေကို နိုင်...
ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်သို့ ပြည်တွင်းမှ ပေးပို့...
If I were notaMuslim, I would beacitizen of My...
လူနည်းစု မြန်မာမွတ်စလင်များနှင့် ဥပဒေစိုးမိုးမှု ဆေ...
နာရီစင်လက်ဝါးကပ်တိုင် ကို ကြံ့ဖွ့ံ့ပါတီဝင် ကျေးရွ...
အပူရှိန်ဒဏ်ကြောင့် နေပူထဲအကာအကွယ်မဲ့သွားခြင်း၊ ကြာ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့  ဗီဒီယိုဖိုင့်များ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကြွေး ၃.၇၂ ဘီလျံကို ဂျပန်နိုင်ငံ...
မြန်မာစစ်တပ် ခလေးစစ်သား စုဆောင်းဆဲ
Suu Kyi's party set to boycott parliament
Myanmar nationals seek refugee status
ဗမာ့နိုင်ငံရေး မိတ်ဆွေ ပါတီတွေရဲ့သတင်းစာ ရှင်းလင်း...
Rohingya Refugees protests outside UNHCR in India
ထိုင်းနိုင်ငံ၌ မြန်မာယာယီပတ်စပို့ ထုတ်ပေးရေးရုံးဖွ...
မြန်မာအပေါ် ပိတ်ဆို့ထားမှုများ EU နိုင်ငံများကဆိုင်...
မြန်မာပြည် အပြောင်းအလဲ နဲ့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး အခွင့်...
ကျမ်းကျိန်ဆိုရမည့် စာသား သဘောတူညီချက် မရသေး
နိုဘယ်လ်ဆုရှင်များရဲ့The Elders အဖွဲ့မှ ဒေါ်အောင်ဆန...
Rohingya ‘camping out’ at UNHCR office
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ ဆေးရုံးကြီးမှ အကျင့်ပျက်မှုများ
ဆိုင်းတောင်ကျေးရွာနှင့် ကံမမြို့ဖြစ်ရပ်များကို မြန...
ဘားမားပို့စ် အယ်ဒီတာချုပ် ဦးသက်လွင်ဦး အတွက် ကျန်...
ကျမ်းကျိန်စာသား မပြင်ပါက NLD လွှတ်တော် မတက်သေး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အောင်မြင်မှု နိုဘဲလ် ငြိမ်းချမ်း...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား နိုဘယ်လ်ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားအတ...
မြန်မာ အပေါ် အရေးယူမှု အီးယူ တစ်နှစ် ရပ်ဆိုင်းမည်
လွှတ်တော်ပြင်ပ ညီလာခံမှသာ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်နိုင်မည်ဟ...
ဆိုင်းတောင်ရွာ ဆုတောင်း ဝတ်ပြုဆောင် အကြမ်းဖက်ဖျက်ဆ...
ရခိုင်ပြည်နယ်က ရိုဟင်ဂျာ ( ၃၀၀ )ကျော် အိန္ဒိယနိုင်င...
အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး သင်တန်းပေး ဆွေးနွေးမှု NLD စတ...
ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုမည့် စာပိုဒ် ပြင်ဆင်ရန် NLD နေပြ...
အစိုးရအဖွဲ့ ပြင်ဖွဲ့ရန် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် စဉ်းစားေ...
ဥပဒေရဲ့ အထက်မှာ ဘုန်းတော်ကြီးများလည်းရှိတယ်
ကျမ်းသစ္စာ စကားရပ် ပြင်ဆင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ဒေါ်အောင...
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် အစိုးရ၀န်ကြီးအဖွဲ့ ဂျပန်အစိ...
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုတချို့ အမေရိကန် လေ...
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ရောက်ရှိနေတဲ့ မြန်မာအစိုးရက...
ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဝါကာအူဒိန်နှင့် ဗွီအိုအေ တွေ.ဆုံးမေ...
၁၁ ရာစုမှ၁၉၆၂ အထိ မြန်မာ့ မွတ်စလင် သမိုင်းစာအုပ်
၁၈၂၃ ခုနှစ် မတိုင်မီက မြန်မာမွတ်စလင် သမိုင်း
Rohingya under attack by Rakhine terrorists in Arakan state
The lady ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား
ဘာသာရေး ဆိုင်ရာ ဥပဒေပြဠာန်းချက်
မြန်မာ မူစလင် ဘင်္ဂါလီမဟုတ်ပါ အပိုင်(၁)
မြန်မာ မူစလင် ဘင်္ဂါလီမဟုတ်ပါ အပိုင်(၂)
အမေစု သင်္ကြန်း ဓါတ်ပုံများ
ဒေါက်အေးချမ်းနှင့်အပေါင်းပါ(ကိုကိုလင်း ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်)
ဒေါက်တာဝါကာအူဒ္ဒိန်နှင့် VOA အင်တာဗျူး
A forgotten Human Right Crisis